မြဝတီမြို့၌ ထိုင်းဘတ်ငွေ ဈေးစံချိန်တင် မြင့်တက်နေသောကြောင့် မြန်မာကုန်သည်များ ထိုင်း ကုန - Yangon Media Group
မြဝတီမြို့၌ ထိုင်းဘတ်ငွေ ဈေးစံချိန်တင် မြင့်တက်နေသောကြောင့် မြန်မာကုန်သည်များ ထိုင်း ကုန
မြဝတီ၊ သြဂုတ် ၆
မြန်မာ-ထိုင်းနယ်စပ် ကရင်ပြည်နယ်၊ မြဝတီမြို့တွင် မြန်မာကျပ်ငွေနှင့် ထိုင်းဘတ် ငွေနှစ်မျိုးစလုံး အသုံးပြုလျက်ရှိရာ သြဂုတ် ၆ ရက်တွင် ထိုင်းဘက်ငွေ ဈေးမှာ စံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့သော ကြောင့် ကုန်သည်များ ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းများအား အဝယ်ရပ်ထားရ ကြောင်းသိရသည်။ လွန်ခဲ့သည့် ၁၅ ရက်ခန့်က ထိုင်းနိုင်ငံသုံးဘတ်ငွေ ၂၃၅ဝ ဘတ်လျှင် မြန်မာငွေကျပ် တစ်သိန်း ဈေးနှုန်းရှိခဲ့ရာမှ သြဂုတ် ၆ ရက်တွင် ထိုင်းဘတ် ၂၂၈၅ ဘတ်လျှင် မြန်မာငွေကျပ်တစ်သိန်းထိ ထိုင်းဘတ်ငွေ ဈေးမြင့်တက်ခဲ့သည်။
”အခုထိုင်းဘတ်ငွေဈေးမြင့် တက်လာတဲ့အတွက် ထိုင်းကုန် တွေအရောင်းထိုင်းသွားတယ်။ ဘတ်နဲ့ဝယ်ရင်ထိုင်းကုန်တွေက အရင်ကလည်းဒီဈေးပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ လူတိုင်းကဘတ်မသုံးကြတော့ မြန်မာငွေနဲ့တွက်ပြီးရှင်းရင် အရင်ထက်ဈေးပိုသွားတာပေါ့။ ဒါကြောင့် ထိုင်းစားကုန်တွေကိုအဝယ်ရပ် ထားပြီးလက်ကျန်တွေပဲရောင်း နေတယ်” ဟု မြဝတီမြို့ ဘုရင့်နောင် ဈေးကြီးအတွင်းမှ ကုန်သည်တစ် ဦးကပြောသည်။
လက်ရှိ ဘုရင့်နောင်ဈေး ကြီးအတွင်းရောင်းချလျက်ရှိသည့် ထိုင်းကုန်စည်ဈေးနှုန်းများမှာ စား ဆီ ၁၇ ပိဿာဝင် ပလတ်စတစ်ပုံး ကြီးတစ်ပုံးလျှင် ကျပ်၁၈ဝဝဝ၊ အထုပ် ၃ဝ ပါ မားမားခေါက်ဆွဲ ခြောက် ခြောက်ဖာပါတစ်ပါကင် ကျပ် ၃ဝ၅ဝဝ၊ ဗျိုင်းတံဆိပ်နို့ဆီ လေးဒါဇင်ပါ တစ်ပါကင်ကျပ် ၃၂၅ဝဝ ဖြင့် ရောင်းချလျက်ရှိပြီး ရွှေဈေးနှုန်းမှာ ထိုင်းရွှေတစ်ဘတ် လျှင် ၁၉၂ဝဝ ဘတ်၊ မြန်မာငွေ ကျပ် ၈၄ဝဝဝဝ၊ မြန်မာရွှေမီး လင်းတစ်ကျပ်သားလျှင် ကျပ် ၉၄၂ဝဝဝ ဈေးနှုန်းများဖြင့် ရောင်း ချလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ မြဝတီမြို့သည် နယ်စပ်မြို့ဖြစ် သောကြောင့် မြန်မာကုန်ပစ္စည်း ရောင်းချသော်လည်း ထိုင်းကုန် ပစ္စည်းများကိုဝယ်ယူသုံးစွဲမှု ပိုမို များပြားကြောင်းသိရသည်။
ခန္တီးရှိ မှော်များမှ တစ်ဆင့် မြို့ပေါ်ထိ မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲမှု များလာသောကြောင့် မူးယစ်အထူ?
ဒေသခံများ ကန့်ကွက်မှုများ ရှိနေသည့် တောင်ကြီးမြို့၏ လေးခုမြောက် ညဈေး စတင်ဖွင့်လှစ်
မန္တလေးမြို့တွင် အများပြည်သူ နားနေနိုင်ရေး အပူရှောင်စခန်း ၂၀ ဖွင့်လှစ်ထား
(၄၁)ကြိမ်မြောက် ကျောက်ဆည်မြို့နယ် သီတင်းကျွတ် ဆင်လှူပွဲတော်နှင့် ဆင်အကအလှ ပြိုင်ပွဲကျင်းပ
မြန်မာ – ထိုင်း နှစ်နိုင်ငံပိုင် မယ်ဆိုင် – မယ်ဟောက်ချောင်း နယ်နိမိတ်တစ်လျှောက်ရှိ ကျူးကျော??
‘ဗိုလ်ချုပ်က ကိုယ့်နိုင်ငံကို နှစ်ပေါင်းများစွာ လာအုပ်ထားတဲ့ လက်ကြီးကို ဖယ်လိုက်ဖို့ဆိုတာ